Warbixin Bosaaso:-Go”aankii AUN Ugaas Yaasiin iyo Cali Hiirad Faahiye Ee Sanadii 1992-dii. | Raadreeb
May 18, 2018 | Filed under: Articles,Wararka | Posted by: Ducaysane143
BOOSAASO GO’AANKII AY GO”AAMIYEEN UGAAS YAASIIN UGAAS CABDIRAXMAAN IYO CALI HIIRAD FAAHIYE AUN EE BARAKACAYAASHII BOSAASO YIMID SANADII 15-05-1992DII.
Kadib markii ay usoo barakaceen qaybo badan oo bulshada Soomaaliyeed ka mida Magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda. Isla markaasna abuurtay in qaybo kamida dadkii soo barakacay ay ku noqdaan magaalada dad aan guryo iyo gabaad ay dhaxanta iyo roobka ka galaan heysan. Taasoo sababtay in Magaalada lagu arko dad qoysas u badan oo derbi jiif magaalada ku noqday. Halka kuwa kalena ay degeen meelo wadooyina iyo dhul banaan oo ay lahayeen dadka degaanka Magaalada Boosaaso.
Arintaasi waxay abuurtay xasarad in qaybo kamida dadka degaanka ay ka caroodaan dadka sida sharci daradaa kusoo degay dhul ay leeyihiin oo banaanaa ama daafaha wadooyinka. Taasoo abuurtay dood iyo is fahmiwaa.
Dhanka kale waxaa magaalada kusoo kordhay Tuugo iyo Amni daro aan waayahaa Boosaaso lagu aqoon. Taasoo sii kordhisay in qaybo kamida dadka degaanku ay magaalada u sameeyeen dhalinyaro amniga sugta. Taasoo marar badan dhibaatooyin ka soo gaareen dadkii soo barakacay oo aan fulinin amaradii lagu xanibayay dhaqdhaqaaqa magaalada oo wixii 12ka saqda dhexe ka danbeeya la joojiyay.
Dhacdooyinkaas iyo qasaare burcad iyo ciidamada amaanka magaalada ayaa sababay inay dadka degaanka qaybo kamida soo jeediyaan in dadka soo barakacay degaanadooda loo kala raro. Taasoo ugu muuqatay xasilooni darada, nadaafad xumida iyo tuugada magaalada kusoo korortay inay yaraan doonto.
Waxaase arintaas cod dheer ku diiday, qaybo kamida Odayaasha iyo waxgaradka magaalada oo ay horseed u ahaayeen Ugaas Yaasiin Ugaas Abdiraxmaan iyo Cali Hiirad Faahiye.
Waxayna soo jeediyeen in dadka la dejiyo dhul ay lahaayeen dadka degaanka iyo dhul dowladu lahayd oo xiligaas banaanaa.
Waxaana kamid ahaa meelihii la dejiyay.
1- Gol Ciise oo ahaa dhul Dowladeed oo xiligaas banaanaa.
2- Necfish oo ahayd warshad kaluunka qaboojisa, isla markaana barafka sameysa.
3- Xaruntii ADC da ee laanta hawada.
4- Buulo Qodax oo ahayd dhul uu Ugaas Yaasiin AUN uu lahaa.
5- Buulo Abow oo dhulka kuyaalay uu bixiyay AUN Abdullahi Maxamuud Faarax.
6- Meel u dhaxaysa Minisaariyo iyo Madaxtooyada oo uu lahaa Gen. Cali Ismaaciil Maxamed.
7- Beerta Ugaaska oo ku taalay agagaarka Hotel Gacayte iyo meelo kale.
Waxay Odayaashu soo jeediyeen inaan dadka dhulka laga sheegan oo dhulku yahay dhul Soomaaliyeed, dadkuna yahay dad Soomaaliyeed. In Soomaaliya laka sheegtona aanay sharaf ahayn.
Waxay dadka ku booriyeen. Hadii la doonayo in magaaladan camiranto, waxay u camirmeysaa waa idinka oo dhulka iyo guryahaba laydanka kireysanayaa ama leydinka iibsanayaa.
Noqda kuwo tusaale u noqda Soomaali oo ay Soomaali ka barato inaysan dhul iyo degaan kala sheeganin.
Waa inaad tuulooyinkiina iyo degaanadiina u ogolaataan inay Soomaali idinla leedahay oo aydan Soomaali ka xigsanin dhul Soomaaliyeed.
Hala mid noqonina dadka Diinta iyo Soomaalinimada ka aradan ee Adeerayaaloow noqda kuwa taladeena qaata.
Boosaaso iyo degaanka uu Ugaas Yaasiin Ugaaska u yahay taladaasaa lagu wada degay oo loogu wada nool yahay.